Best Toriteny Ever – 2trondro
Home / About / Best Toriteny Ever
Te hanorina repository ny tsara indrindra toriteny izay efa renay (na, amin'ny tranga sasany dia nanome) na dia napetraky mpamaky.
Izahay tsy dia zava-dehibe amin'ny izay nanome ny toriteny sy kokoa liana amin'ny hafatra sy ny tsy fiovaovana ny foibe fotopinoana, na ny fampiharana ny finoana Katolika. Noho izany, azafady manolotra ny toriteny tahaka ny lahatsoratra tsotra. Rehefa ampy, Ho isika hamoaka ny famoriam-bola.
Manokan'ny filazantsara Reading:
Mba hanome ny loharano:*
Moa ve isika manafaka ny hamoaka izany toriteny raha tsy mitady ny zon'ny mpamorona nahazoana alalana?*